Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi oo sheegay in la joogo Xiligii farmaajo uu ka hadlai lahaa Wilasha ku maqan Eritrea Nolol iyo geeri. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi oo sheegay in la joogo...
Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi oo sheegay in la joogo Xiligii farmaajo uu ka hadlai lahaa Wilasha ku maqan Eritrea Nolol iyo geeri.
Waxaa magaalada Muqdisho manta mar kale ka dhacay banaanbax lagu baado goobayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 2000 oo loo qaaday laba sano ka hor Dalka Eritrea oo la sheegay in lagu soo tababarayo.
Waxa arintaas ka hadlay Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi oo sheegayu banaanbax ballaaran ka dhacay magaalada Muqdisho, lagu doonayo in Nolol ama Geeri lagu sheegaa Wilasha ku maqan Eritrea dibna loogu soo Celiyaa dalkoodii hooyo.
Dibad-baxa manta dhyacay oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa dhigay waalidiinta ay ka maqan yihiin wiilashaasi iyo dadweyne kale, wuxuuna ka dhacay isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Previous articleMaxaad Kala socotaa Isbedelka Taliyaasha ?.
Next articleSacuudiga oo oo ruqsad loo siisay haweenka garoobada ah iyo kuwa aan weli guursan in ay keligood dibedda u bixi karaan muxrim la’aan.
Saacadaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan in ay soo gaaran Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaaradda Ganacasiga...
Dowlada Mareykanka oo xayiraado xooggan ku soo rogaya dalka Itoobiya...